Madaxweyne Gaas : Xiriirka Imaaraadka qiimo gaar ah ayuu noogu fadhiyaa – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News April 16, 2018 Leave a comment
Madaxweynaha maamulka Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in tababarayaal u dhashay dalka Imaaaraadka lagu qashqashaaday garoonka diyaaradaha Boosaaso.
‘’Imaaraadka waxaa ay noo tababareen Kumannaan ciidamo ah oo ka howlgala Barriga iyo Badda, dhinaca kalana ka qeybqaata howlgalada la dagaalka Argagixisada iyo Burcad baddeeda’’ ayuu yiri Gaas.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa u muuqda mid sii xumaanaya tan iyo wixii ka danbeeyay markii ay dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay $9 milion iyo 600 oo Kun oo dollar oo lagu siday diyaarad laga leeyahay dalka Iskutaga Imaaaraadka gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Axadii todobaad hore.
← Weerarka reer Galbeedka ee Suuriya ma xakamayn karaa Assad?
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay xiriirka Imaaraadka Carabta →